PVC UPVC CPVC पाइमा के फरक छ ? - Lalpurza
PVC UPVC CPVC पाइमा के फरक छ ?
PVC UPVC CPVC पाइप घर निर्माणको क्रममा प्रयोग हुने पाइपहरू हुन । घर बनाउने क्रममा तपाईँलाई दुबिधा हुन सक्दछ कि कुन प्रयोजनका लागि कस्तो प्रकारको पाइप प्रयोग गर्ने ? आजको यस लेखले हामी तपाइको दुबिधा हटाउने प्रयास गर्दछौ.
PVC को पुरा रूप Polyvinyl chloride हो । यो ज्यादा हलुङ्गो र बलियो सामाग्रीबाट बनेको हुन्छ । यसको निर्माणको क्रममा विभिन्न प्रकारको प्लास्टिसाइजर प्रयोग गरी निर्माण गरिएको हुन्छ । जसले गर्दा यो नरम र लचिलो हुन्छ । सामान्यतया घर निर्माणको क्रममा ढल निकासका लागि प्रयोग गरिन्छ । जुन घरमा जमिन भित्र विच्छाएर ढलको निकास निकालिन्छ । PVC पाइपमा बर्सातको पानी निकास, किचन तथा बाथरुमको फोहर पानी र शौचालयको ढलको निकासका लागि प्रयोग गरिन्छ ।
यु पि भि सि UPVC को पुरा रूप Unplasticised Polyvinyl Chloride हो ।यस प्रकारको पाइप निर्माणमा प्लास्टिसाइजरको प्रयोग गरिँदैन त्यस कारण यसमा लचकपना हुँदैन र कडा हुन्छ । त्यस कारण यसको बलियोपना कडा किसिमको हुन्छ । यो पाइप पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने किसिमबाट तयार गरिएको हुन्छ । यसलाई वातावरणले पनि प्रभाव पार्न सक्दैन । युपिभिसिलाइ मोइस्चरले पनि कुनै प्रभाव पर्दैन । कुने उद्योग तथा कलकारखाना बाट केमिकल निस्कने स्थानमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । केमीकलले यसलाई कुनै किसिमको प्रभाव पार्दैन । त्यसैले यसलाई ठुला ठुला उद्योगहरूमा प्रयोग गरिन्छ ।
सिपिभिसिको पुरा अर्थ Chlorinated Polyvinyl chloride . PVC मा प्लास्टिसाइजर र क्लोरिनेशन गरे पश्चात् सिपिभिसि पाइपको निर्माण हुने गर्दछ । यसको लचकपना राम्रो हुन्छ । PVC र UPVC पाइप भन्दा यो धेरै बलियो हुन्छ र मूल्यको हिसाबमा नि महँगो हुन्छ। यो उच्च गुणस्तरको हुन्छ । ज्यादा चिसो र ज्यादा तातो तापक्रम पनि सहन सक्ने क्षमता यसमा रहन्छ । यसले अधिक ९० डिग्री सेल्सियस र चिसोमा माइनस ४० डिग्री सेल्सियस तापक्रम सहन सक्ने क्षमता हुन्छ । यस किसिमको पाइप खास गरी घर निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ ।
पिभिसि पाइप घरको ढल निकासका लागि प्रयोग गरिन्छ । युपिभिसि पाइप उद्योगहरूमा केमिकल निकासका लागि प्रयोग गरिन्छ भने सिपिभिसि पाइप घरमा पानी वायरिङका लागि प्रयोग गरिन्छ ।
← घर निर्माणका लागि कुन सिमेन्ट उत्तम ? पिपिसि या ओपिसि → घर निर्माणमा ACC Block वा इँटा कुन प्रयोग गर्ने?